Tantara fohy momba ny 'Show Tonight'
Tatitra haingana momba ny 'Show Tonight'
Mpitarika ankehitriny: Jimmy Fallon
Jay Leno (Martsa 2010 ka hatramin'ny Febroary 2014)
Conan O'Brien - Jona 2009 hatramin'ny Janoary 2010
Jay Leno - 1992 ka hatramin'ny 2009
Johnny Carson - 1962 hatramin'ny 1992
Jack Paar - 1957 ka hatramin'ny 1962
Steve Allen - 1954 ka hatramin'ny 1957
Mpitarika ankehitriny: Questlove
Mpitarika past past:
Rickey Minor - 2010 ka hatramin'ny 2014
Max Weinberg - 2009 hatramin'ny 2010
Kevin Eubanks - 1995 ka hatramin'ny 2009
Branford Marsalis - 1992 ka hatramin'ny 1995
Doc Severinsen - 1967-1992
Milton DeLugg - 1966 hatramin'ny 1967
Skitch Henderson 1962 ka hatramin'ny 1966
Jose Melis - 1957 ka hatramin'ny 1962
Skitch Henderson - 1954 ka hatramin'ny 1957
Band: The Roots (The Band Show Tonight)
Mpanambara ankehitriny: Steve Higgins
Mpanao gazety taloha:
Format: One-hour, mpampiantrano klasika-behind-the-desk
Fampahalalana mivantana: NBC, herinandro, 11:35 ka hatramin'ny 12:35 maraina ET
Tape: Vanim-potoana, avy any New York City.
Premiere Date: 1954, miaraka amin'i Steve Allen
Tantara fohifohy ny 'Fampisehoana anio amin'ny andro maoderina'
Ny Tonight Show Show dia manaraka ny fizarana enina segondra, ny endrika fandaharana amin'ny talk show tamin'ny alina. The show ::
Manomboka amin'ny monologo topical.
Araho miaraka amin'ny fanosehana sy ny hatsikana avy any aoriana ao ambadiky ny birao famelabelaran-kevitry ny mpandahateny na sariitatra iray
Mahazo ny vahiny voalohany
Fivoarana miaraka amin'ny takelaka kôma
Mahazo ny vahiny vahiny
Miaraka amin'ny hetsika mozika na fampihorohoroana
Jimmy Fallon no tonga ny andiany fahenina tao amin'ny The Tonight Show tamin'ny febroary.
17, 2014. Nahomby tamin'i Jay Leno izy, izay nahavita ny diany faharoa tamin'ny Tonight Feb. 6, 2014.
Ny fifindrana avy any Leno mankany Fallon dia nandeha tsara tahaka ny nantenain'i NBC. Ireo fiovan'ny toetr'andro teo aloha dia tsy nandeha tsara.
Ny mpanolotsaina fahiny Conan O'Brien dia noraisina ho an'i Jay Leno tamin'ny 1 jona 2009, nandritra ny tetezamita efa niorina tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny dimy taona.
Nambaran'i Leno ny fanapahan-keviny hisintaka ny The Tonight Show tamin'ny 2004, ary i O'Brien dia nantsoina hoe mpandimby azy.
Na dia nisy aza fotoana vitsy nanahirana tamin'ny faran'ny taona 2008 sy ny voalohandohan'ny taona 2009, raha toa ka toa nanohitra ny hevitra hoe hiala an'i The Tonight Show i Leno, dia mora kokoa ny tetezamita. Angamba satria nomena fandaharana vaovao vaovao i Leno, The Jay Leno Show, izay niandoha tamin'ny septambra 2009.
Tamin'ny janoary 2010, noho ny fihenan-dRajo sy ny fandrahonana avy amin'ny tobim-pifandraisana izay te handrotsaka an'i Leno ho an'ny fandaharana hafa, NBC dia nanamboatra drafitra hamerenana an'i Leno any amin'ny toerana misy azy amin'ny 11:30. Anisan'izany ny famindrana ny The Tonight Show amin'ny misasakalina. Tsy nanaiky i O'Brien ary afaka niala teo amin'ilay fampisehoana tsy nahy.
Leno naverina tamin'ny fampiantranoana ny The Tonight Show tamin'ny Martsa 2010.
O'brien dia tsy vahiny amin'ny famenoana kiraro lehibe. Ankoatra ny fanatrehana ny The Tonight Show avy ny laharana faha-1 ny mpandrindra ny Leno, O'Brien dia nantsoina an'i David Letterman taorian'ny nandimby an'i Letterman izay nisafidy ny handao ny NBC sy ny Late Night ho an'ny CBS sy ny Late Show .
Ny tetezamita dia nanaraka ady efa niady ho an'ny biraon'ny Tonight Show . Ny mpampiantrano teo aloha Jay Leno dia niady mafy mba hahazoana ilay fifaninanana taorian'ny fanambaran'i Johnny Carson ny fisotroan-drononony tamin'ny 1992. Ny ankamaroany dia nihevitra fa ny gig dia handeha any amin'ny Letterman Late Night mpampiantrano - anisan'izany Letterman.
Ny ankamaroan'ny tantara an-tsehatra opera-toy ny ambangovangon'ny tantara momba ny tetezamita dia lazaina amin'ny lahatsoratry ny The Late Shift (Bill of Life), izay be mpividy indrindra an'i Bill Carter.
Ny fisotroan-dronono faharoa an'i Jay Leno
Tamin'ny Aprily 2014, nanambara ny fisotroan-dronono faharoa avy amin'ny The Tonight Show i Leno. Izany dia taorian'ny adihevitra mafana tamin'ny teny NBC. Tamin'io fotoana io koa, NBC dia nanambara fa ny Josty Fallon, mpampiantrano ny alina dia handray an'i Leno ho mpampiantrano amin'ny taona 2014.
Ny Tonight Show Show dia manana tantaram-pirahalahiana, manomboka amin'ny endrika mahazatra kokoa amin'ny 1953 miaraka amin'i Steve Allen ho mpampiantrano. Rehefa nisotro ronono i Allen, dia naverina indray ny fandaharana ny Tonight! America After Dark ary nanaraka ny endrika akaiky kokoa ny The Today Show , izay malaza tamin'izany fotoana izany.
Tsy naharitra ela anefa izany, ary tamin'ny 1957, dia i Jack Paar no nitana andraikitra. Mpihira malaza no nandao ny fampisehoana tamin'ny taona 1960 taorian'ny nanesorana sivana ny ampahany tamin'ny fandaharany.
Niala ara-bakiteny izy, namela ny mpilaza azy, Hugh Downs, mba hamita ilay fandaharana. Naverina iray volana taty aoriana ny mpivady. Ny teny voalohany dia hoe: "... raha niteny aho talohan'ny nanapahako hevitra ..."
Ny Paar dia nandimby an'i Johnny Carson, azo antoka fa ilay mpampiantrano no tena mifandray amin'ny The Tonight Show satria misy izy ankehitriny. Carson no nampiantrano ny fandaharam-potoana nandritra ny efa ho 30 taona, namorona endrika tsy hay hadinoina toy ny Carnac ny Magnificent sy ny Art Fern. Carson koa dia nampiasa malaza amina trano fialantsasatra rehefa nanao fitsangantsanganana izy (anisan'izany i Joan Rivers, Bob Newhart , Jerry Lewis, ary David Letterman), fomban-drazana efa najanona tanteraka raha tsy nisy olona maromaro nitazona ny fampisehoana Late Show raha ny Letterman dia nandidy ny fandidiana fo.
Androany, Fallon dia manomana ny The Tonight Show ho amin'ny taonjato faha-21, taranaka Generation X ho an'ny mpihaino an'arivony maro izay manantena ny alina ho takalon'izy ireo handray anjara amin'ny haino aman-jery sosialy, amin'ny alàlan'ny serivisy fampitaovana dizitaly, ary mamorona fotoana miavaka.
Tafatafa tamin'i Katie Leclerc (Daphne, 'niova tamin'ny fiterahana')
"Minitra handresenana" Lalao baolina fandaka: fanoherana ny herisetra
Ny mampiavaka ny tena fahafinaretana zava-miafina hita tamin'ireo taona 2000
Ny fandaharana isan-kerinandro 'The View'
Ny Halloween "minitra horaisina" Party Games
Sarin'i Charlie Rose
Ny fomba hahatongavana ho mpifaninana amin'ny "izay te ho lasa mpanafika"
Inona no fiara Double Cab?
Toro-hevitra momba ny hosodoko amin'ny sora-baventy na hazo
Requisitos para Dreamers para permettre para via EEUU
Top 10 Rock Wedding Dance Songs voalohany
Ny ekipa mitebiteby ho an'ny fahaiza-manaon'ny basket
Misy vongan-dranom-bolanao am-potaka ve ny amily mena?
Saina sy mahitsy
Fampianarana ao amin'ny Northern Illinois University (NIU)
Ady Krimeana: Battle of Balaclava
Manaova fasika maizim-borona
Taratasy Misokatra Ho An'ny Vehivavy Kristiana
Famaritana ny angovo azo ampiasaina
Top Gospel Southern Groups
Michael Jackson ao amin'ny sary
Torolàlana ho an'ny "Void" amin'ny programan'ny ordinatera
Ny fifandimbiasana amin'ny vavaka
Reginald Fessenden ary ny Radio voalohany
Trano famakiam-boky ao Dunhuang - Cd Buddhist Scholarly
Kitapo sy fanorenana
Ny Kolotsaina Oneota - Kolotsaina taloha teo amin'ny tantaran'ny Amerikanina Midwesty
Mpanao didy jadona Romanina